Ujeeddo: Maareynta Barnaamijka Isku-xidhka Isku-xidhka Iswada ee Ecommerce | Martech Zone
Maaddaama meheradda internetka ay sii kordheyso, gaar ahaan xilligan Covid-19, iyo sidoo kale sanad ka badan inta lagu jiro xilliga fasaxa, shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexe ayaa si isa soo taraysa u galaya khilaafka dijitaalka ah. Ganacsiyadani waxay tartan toos ah kula jiraan ciyaartoy aad u waaweyn oo dhisan, sida Amazon iyo Walmart. Ganacsiyadan si ay u sii ahaadaan kuwo shaqeynaya oo tartamaya, qaadashada istiraatiijiyad suuq geyn ah waa muhiim.
Martech Zone waxay u adeegsataa barnaamijyada ku-xiran inay dib-u-dejiso kharashaadkeeda iyo inay waddo xoogaa dakhli ah Waqtiyada qaarkood, waxay noqon kartaa gaadiid faa'iido badan… laakiin inta badan maahan, waa caqabad. Waxaan rabaa in aan la wadaago barnaamijyada iyo aaladaha ku habboon dhagaystayaashayda… laakiin sidoo kale ma doonayo in aan dhagaystayaashayda khatar geliyo aniga oo isku dayaya in aan iibiyo aaladaha iyo alaabada ay xiiseeyaan.
Xayeysiinta Purple waxay sii deysay qalab maamul iskuduwaha maaraynta barnaamijka, Ujeeddo. Waxaa awood ku leh xayeysiinta tiknoolajiyada lahaanshaha ee 'Advertise Purple' iyo waqtiga-dhabta ah, fikradaha ku saleysan xogta, daah-furka cusub ee xiriirinta, qorista, iyo bixinta raadinta waxaa loogu talagalay ganacsiyada yar yar iyo kuwa dhexe iyo kuwa ku cusub suuq geynta.
Suuq geyn la shaqeysa waa mid ka mid ah istaraatijiyadaha ugu wax ku oolka badan ee waxqabadka ku wajahan ganacsiga meheraddu ku lug yeelan karaan. Doolarka doolarka, suuq geynta isku xidhka ayaa ah kan ugu dakhliga badan ee soo gala shirkadaha e-commerce. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay in hagidda suuqa ku xiran aysan sahlaneyn. Waxaa jira in kabadan 1.2 milyan oo xiriiriyayaal firfircoon maanta iyo tirinta, badankooduna ma wadaan dakhli macno leh. Waxaan u abuurnay Ujeedo si aan awood ugu siino shirkad kasta oo xajmi weyn leh inay abuurto oo fuliso istaraatiijiyad raacsan oo xog ku saleysan wax ku ool ah.
Kyle Mitnick, Madaxweynaha Xayeysiinta Purple
Ujeeddadu waa adeegsi is-adeegsi suuq-geyn gacansaar leh oo ka faa'iideysanaya in ka badan 10 milyan oo dhibco xog ah oo ka socda in ka badan 87,000 wada-hawlgalayaal gacansaar ku leh dhammaan dhinacyada ganacsiga 23, oo ay ku jiraan qalabka & dahabka, dharka, qalabka elektarooniga, caafimaadka & quruxda, iyo guriga & nolosha.
Ujeeddadu waxay ujeedkeedu tahay in la simo goobta lagu ciyaaro isla markaana la xoojiyo milkiile kasta oo ganacsi e-commerce ah si uu ula wareego istiraatiijiyaddooda suuq geyn ee u gaarka ah fikradaha loo baahan yahay si loo sameeyo go'aannada xogta ku saleysan. Ulajeeddo ahaan, milkiileyaasha ganacsiyada waxay marin u helaan:
Aqoonsiga Ku-Xidhnaanta Sare - Shaqadani waxay cadeynaysaa shirkadaha ku shuraakoobaya lacagaha ugu badan ee ganacsi uusan hadda ku howlanayn. Sidoo kale liis garaynta dhammaan macluumaadka xiriirka ee la yaqaan, waxay sidoo kale bixisaa qaabab fidin oo ka caawiya bilowga hawlgelinta.
Warbixinta Talooyinka Komishankas - Aragti-casriyeysan oo ku saabsan waxa celcelis ahaan heerarka komishanku ay u yihiin shirkad kasta oo toosan. Isticmaalayaashu way arki karaan haddii ay lacag dheeraad ah ku bixinayaan xiriir iyo sida ay tahay inay ula qabsadaan sicirkaas si ay ugu badiyaan guusha.
Warbixinnada Guusha Bil-Bilaha ah - Kooxaha suuq geyntu waxay helaan aragti cad oo ku saabsan sida shirkad kastaa u shaqeyso, kuwee ayaa ka fiican kuwa kale, halkaasoo ay ku yaryihiin soo noqosho, iyo aragti guud oo ku saabsan guusha ololaha ee KPIs.
Talooyin iyo Khiyaamo Suuq Ku Xidhan - Maktabad dhan oo agab ah oo ku saabsan sida loogu sameeyo olole suuq-geyn gacansaar leh sida ugu macquulsan. Shirkadaha qaadanaya istiraatiijiyaddan markii ugu horreysay, waxay awood u siineysaa go'aannada in lagu gaaro kalsooni.
Waqti dheer ayaa dhaafay maalmaha wakaaladaha xayeysiinta sanduuqa madow. Ulajeeddo, dib u eeg istiraatiijiyadaha kobcinta ku-xirnaanta ee hadda jira, iyo talooyinka ololaha adigoo gujinaya badhanka.
Isku day Ujeedo Bilaash ah
Tags: maaraynta gacansaarkabarnaamijka affiliatehel xiriiriyayaalsifiican